Fikarohana sy fampandrosoana | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd.
Ivotoerana fikarohana indostrialy, ny vondrona dia miara-miasa amin'ny andrim-pikarohana sy fampandrosoana any an-toerana sy any ivelany fanta-daza ao anatin'izany ny Stanford University, University Tsinghua, University of Peking, University of Sichuan Normal, Laboratoara injenieram-pirenena an'ny lozisialy Big Data System, Beijing Financial Technology Research Institute, Laboratory Shenzhen Pengcheng, sns Ny vondrona dia nanangana ny Yunjin Big Data Research Institute ho ivon-toeran'ny fikarohana indostrialy.
Zhu Jie, CTO an'ny Smart Space
Nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Hubei Normal, ny lehibe indrindra dia ny injenieran'ny fampahalalana elektronika. Niasa tamina orinasa voatanisa malaza marobe izy, nifantoka tamin'ny indostrian'ny audio-visual matihanina nandritra ny folo taona mahery. Mandritra izany fotoana izany dia nanolotra serivisy fampitaovana matihanina ho an'ny Universiade Shenzhen izy. Amin'izao fotoana izao dia nahazo patanty famoronana maromaro sy vokatra patanty vaovao izy.
Profesora Sun Jiaguang, mpanara-maso ny dokotera, dia akademisiana ao amin'ny Akademia Shinoa misahana ny injeniera, talen'ny Big Data Center ao amin'ny Oniversiten'i Tsinghua ary talen'ny National Laboratory Engineering an'ny Big Data System Software. Taloha izy no talen'ny lefitra an'ny National Science Science Foundation any China ary ny dean an'ny School of Information ao amin'ny Oniversiten'i Tsinghua. Mpikambana ao amin'ny Komitin'ny mari-pahaizana akademika sy vondrona fanombanana ao amin'ny filankevi-panjakana, talen'ny National Enterprise Information Application Support Software Engineering Technology Research Center, ary ny filohan'ny Fikambanana Engineering Engineering China.
Profesora Yang Shiqiang, mpanara-maso ny dokotera, sekreteran'ny Komitin'ny antoko ao amin'ny Laboratory any Peng Pengheng Shenzhen. Nanompo ho sekreteran'ny Komitin'ny antoko ary talen'ny komity akademika ao amin'ny departemantan'ny informatika ao amin'ny Oniversiten'i Tsinghua
Dr. Zhao Yong, manam-pahaizana momba ny Big Data & Expert Blockchain, Chief Architect
Nahazo diplaoma tamin'ny University of Normal University (Bachelor), University of Tsinghua (Master) ary ny University of Chicago (PhD) izy. Ny mpampianatra azy dia ny profesora Lan Foster, rain'ny American Grid, ary koa akademisiana ACM amerikana. Namoaka sanganasa fandikan-teny 14 izy ary namoaka taratasy efa ho 70 tamin'ny gazety iraisam-pirenena.
Izy dia manam-pahaizana momba ny angon-drakitra lehibe ao amin'ny Fikambanana Solosaina Sinoa ary mpikaroka ao amin'ny Ivotoerana Fikarohana momba ny Indostria Blockchain. Niasa tamina orinasa iraisam-pirenena sy anatiny fanta-daza toa ny IBM Global Research Center, China Telecom ary Microsoft izy.
CTO an'ny Yunjin Smart Technology
Teknolojia virtoaly virtoaly sy manam-pahaizana momba ny teknolojia kambana nomerika
Mpanolotsaina manokana an'ny Komity manam-pahaizana momba ny Ivotoerana fitantanana ny zava-misy virtoaly ao amin'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana